WAXAAN U JARJARAAN OO BEERAN YAANYO YAANYO - BEER CAGAARAN
Sidee Gagaab iyo sida loo beeray yaanyo yaanyo
Saldhig u ah dalag cusub oo yaanyo ah ayaa la dhigaa bilowga hore ee beerahooda, sameynta diyaarinta shinnida. Bannaanka beeralayda waayo-aragnimo waxay bilaabaan inay abuuraan miraha dib-u-soo-kabashada Febraayo, iyaga oo siinaya nidaamkooda gaarka ah ee kordhinta biqilka ee sprouts iyo marxaladda adkaysiga cudurka, iyo, ugu dambayntii, helitaanka dhalidda sare. Aynu si faahfaahsan u tixgelinno hababka mustaqbalka ee yaanyada baaluqaa ay awood u yeelan karaan, oo ka bilaabanaya biqilka abuurka iyo soo afjaridda beertooda carrada.
Sprout ama ha biqin
Bannaanka u badan ee bannaanka u, ka hor inta ay bilaabaan inay koraan yaanyo, waxay la yaaban yihiin: baahida loo qabo in biqil abuurka ka hor beerashada.
Diyaargarow haboon ee geedo waxay hubin doontaa goosashada bacriminta, miraha dhadhan fiican leh, iyo sidoo kale ciribtirka cudurrada suurtagalka ah. Waxaa jira dhowr arrimood oo keeni kara dhimashada walxaha beerto xitaa kahor intaan soo bixin:
infekshanka abuurka ah;
kordhay cufnaanta carrada iyo kor u qaadista cusbada;
abuurka qoto dheer;
qoyaan xad dhaaf;
cayayaanka khatarta ah.
Si looga fogaado dhibaatooyinka noocaas ah, abuurka ayaa si fiican loogu diyaariyay hab gaar ah, iyaga oo siinaya difaac adag oo xasilloon. Burburka ayaa door muhiim ah ka ciyaara tan.
Waa muhiim! Haddii aad si toos ah u abuurto abuurka ka hor inta beero, dhalidda waxay kordhin kartaa ilaa 30 boqolkiiba.
Tani ma aha buunbuunin, gaar ahaan haddii lagu beeray si toos ah dhulka, marka ay jirto halis ah in waxyeello cayayaanka. Xaaladdan oo kale, geedo qallajiyey soo baxaan si dhakhso ah, iyo cayayaanka ma leeyihiin waqti ay ku weeraraan qalabka aan la aqbali karin.
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato xulashada miraha
Ka hor intaanad bilaabin si aad u diyaariso abuurka beerashada, waxay u baahan yihiin inay doortaan xaq. Waxaa jira dhowr dhibcood oo u qalma in ay fiiro gaaraan marka ay iibsanayaan geedo:
xaaladaha cimilada (noocyo yaanyo ah ayaa ku kala duwanaan kara beerashada gobollo gaar ah);
Soo-saaraha (noocyada dhoofinta laga yaabo inaysan degeynin xaaladaha cimilada);
Saxeex F1 (macnaheedu waa iska caabin cudur iyo dhalid);
Ujeedada abuurka (xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo ama beerta);
noocyo hore ama goor dambe (waxay kuxirantahay xilliga goosashada).
Sidoo kale, noocyo yaanyo kala duwan ujeedadooda. Sidaa darteed, cunidda khudradda cusub, waxaa wanaagsan in la doorto noocyo casiir leh oo la yiraahdo Bull Heart oo leh qajaar caan ah ama Moskvich, iyo cayayaankaaga waa inaad dhistaa faraha faraha (oo leh saxarad cufan iyo maqaar adag).
Maxaa loo baahan yahay ciidda loogu talagalay geedo yaanyo ah
Doorka muhiimka ah ee beerista ee yaanyada waxaa lagu ciyaaraa habka ciidda si wanaagsan loo xushay. Waxaa jira laba ikhtiyaar: iibso dukaanka diyaarka ah ee diyaarka ah ee dukaanka ama u diyaariya naftaada, kuwaas oo kuwa ugu khibrad badan u jecel inay sameeyaan. Sidaa darteed, si ay u koraan dalagga wanaagsan ee tamaandhada ka soo abuurka guriga, waxaad u baahan tahay inaad bilowdo diyaarinta ciidda tayada sare leh.
Ma taqaanaa? Qiyaastii 60 milyan oo ton oo yaanyo ah ayaa sannad kasta koray aduunka..
Diyaargarowga ayaa ugu fiican in la sameeyo xilliga dayrta. Foore waa inuu ku jiraa sida caadiga ah ee qaybaha: dhulka beerta lagu qasi karo ciid iyo peat, iyadoo lagu daro ash iyo qoryaha qoryaha. Dhulka beerta waxaa laga soo qaataa goobta yaanyada, baradhada iyo dalagyada kale ee solanaceous ma aysan korin xilli ciyaareedkii hore.
Isku dariddu waxay noqon doontaa mid ku habboon halbeegyada haddii aad isku darayso 1 qaybood oo dhul ah oo leh 2 qaybood oo ah peat, 1 qayb oo ah compost iyo qayb ka mid ah ciid ah. Si aad u lumiso fluorine-ka sareeya, 200 g ash, 10 g oo ah HOL, 30 g of superphosphate iyo 10 g of potassium ayaa lagu daraa baaldi isku dhafan. Waqtiyada kala duwan ee koritaanka geedo, ka kooban ciidda waa la hagaajiyaa. Marka, marxaladda ugu horreysa ee diyaarinta ciidda, waxaa lagu ridaa qashin badan iyo ciid yar. Kadibna waa la qabadsiiyay waxaana lagu dabiibayaa jeermis.
Tamaandhada ku habboon ciid badan oo dabacsan oo si sahlan u helaya hawada iyo qoyaanka. Wixii neefsanaan weyn, sphagnum moofa ama budada wax dubista ah ayaa lagu daraa. Tani waxay suurtogal u tahay in ay horumariso xididada wanaagsan.
Bannaanka u leh waayo-aragnimo waxay doorbidaan geedo qaab balka iyo ciid (oo ah saamiga 2: 1). Tilmaamahan, dhadhanka ayaa la geyn karaa Bacriminta macdanta leh dhammaan nafaqooyinka. Isla mar ahaan dhadday waxay u adeegtaa sida budada dubista ee ciidda.
Diyaarinta abuurka beeritaanka geedo
Hababka diyaarinta ah ee abuurka waxay u baahan yihiin waqti badan iyo dareen gaar ah, maxaa yeelay waxay ku socotaa dhaqankooda habboon in dhalidda sare ay ku xiran tahay. Tallaabooyinka noocaas ah waxaa ka mid ah: kala soocida abuurka, kuleylka, wax soo saarka, barareynta, biqilka iyo adkeynta. Aynu si faahfaahin dheeraad ah u eegno mid kasta oo ka mid ah hababka iyo baro sida loo yareeyo yaanyada laga bilaabo abuurka loogu talagalay geedo.
Diyaarinta abuurka beeritaanka wuxuu bilaabmaa bisha Febraayo. Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in la baaro muuqaalkooda. Halkan waa xeerka: waa ka sii fiican. Abuurka waaweyn wuxuu ku jiraa walxo muhiim ah. From iyaga u baxaan yaanyada waaweyn. Si loo doorto miraha tayada sare leh, waxaa lagu dhejiyaa xal gaar ah oo loo diyaariyey cusbo iyo bidix dhowr daqiiqadood. Seeds in kor u kaca ugu sarreeya ee nidaamkan ayaa loo tixgeliyaa mid aan habooneyn, iyo kuwa hoos u dhaadhaca hoose ayaa la qalajiyey oo looga tagay si loo sii wado.
Xilliga qaboobaha ayaa lagama maarmaanka u ah maraakiibta qabow ee qaboobaha xilliga jiilaalka. Ka hor inta aan la beerin qiyaastii hal bil, qalabka waxaa lagu meeleeyay weel nud ah oo kululeynaya 7 maalmood, si tartiib tartiib ah u kordhinaysa heerkulka. Nidaamku wuxuu ka bilaabmaa heerkul ah +20 digrii wuxuuna ku dhammaanayaa heerkulka +80 digrii.
Guriga, batteriga ayaa ugu fiican in lagu kululeeyo. Waa ku filan in laga tago miraha saddex maalmood.
Ma taqaanaa? Cabbirka miraha ee noocyada ugu yar ee yaanyada dhexroorka waxay gaartaa wax ka yar 2 cm.
Yaanyada lafdhabarta ah uma baahna wax-qabad noocaas ah.
Maadaama cudurka bakteeriyadu uuraysan karo laga heli karo miraha, waxaa lagula talinayaa in jeermiska la nadiifiyo. Tani waxay gacan ka geysan doontaa in laga fogaado isku dhicid leh faddarro yaryar. Wixii saliid qaadasho waxay isticmaalaan xal manganis ah. Seeds waxaa lagu dhejiyaa xal 1% waxayna ku hayaan ilaa 20 daqiiqadood. Manganese waxaa lagu bedeli karaa hodheer amase soodhuumeysan, preheated. Xalka this, sheyga beerto waxaa lagu qooyay 10 daqiiqo. Heerka jeermi-dilista ayaa ku dhammaata daaweynta iyada oo loo marayo diyaar garow muhiim ah. Epin ama Immunocytofit, Humate sodium ama daaweynta dadka ee qaabka casiirka aloe waxay u fiican tahay tan.
Seeds waxaa lagu dhejiyaa weel hufan oo leh weel qoyan iyo meel diirran ku ridaan maalin. Ka dib markii la shaqeynayo, si fiican u qalaji oo u sii gudbi talaabada xigta.
Ka hor inta biqilka yaanyada laga bilaabo abuur, waa in la rusheeyo. Ujeedadaas awgeed, qaado weel dhalada ah ama sanduuq caag ah oo leh biyo kulul. Geedo halka lagu duuduubay cheesecloth oo lagu meeleeyay weel. Biyaha waa inaysan gabi ahaanba daboolin hadhuudhka (waa la doorbidayaa nus)
Waxaanu kugula talinaynaa in aad barato noocyo kala duwan oo yaanyo ah sida "Malachite Box", "Lazyka", "Poods", "Superbomb", "Stolypin", "King of London", "Collective Farm Yield", "Labrador", "Caspar", " Niagara, Red Red, Cardinal, Sugar Bison, Red Guard, Gina, Rapunzel, Samara, Little Hood Riding Hood, Mikado Pink, Kiss of Geranium iyo Golden Heart. "
Nidaamka oo dhan waa in loo qoondeeyey 12 saacadood. Xaaladdan, biyaha waa in la beddelo 3 jeer.
Foornada leh abuurka sidoo kale waxay u baahan yihiin inay ka baxaan biyaha si ay u neefsadaan oksijiinka.
Qallajinta si siman waxay isu beddeleysaa yaanyada mustaqbalka. Waxay kor u qaadaa koritaanka dhirta iyo damaanad qaadashada goosashada hore. Nidaamkaan, miraha waxaa lagu faafiyaa saxan daboolan leh faashad qoyan ama warqad jilicsan oo jilicsan.
Waa muhiim! Qolka inta lagu jiro biqilka waa inuu ahaado diiran (qiyaastii +20 digrii).
Isla mar ahaantaana waa muhiim in la isku dheellitiro oo la hubiyo in dharka uusan engegin oo uusan ahayn qoyan.
Ka hor inta biqilka yaanyada ka soo abuurka ah, waxaa lagula talinayaa inay adkaadaan. Maadaama ay yaanyo yihiin dalagyo kuleyl ah oo jacayl ah, adkeynta waxay ka caawineysaa inay si fudud u qabsadaan xaaladaha cimilada. Geedo laga bilaabo abuurka sida diyaarisay sida wanaagsan ula qabsan isbedelka heerkulka, iyo yaanyada waxay u koraan si dhakhso badan. Bushes laga helay abuurka adag, bloom hore iyo siin dhalidda 40-50% dheeraad ah.
Mabda'a nidaamkan ayaa ah in geedo ay saameeyeen heerkul kala duwan. Marka hore, abuurka la kariyey waxaa lagu meeleeyaa qaboojiyaha waxayna halkaas ku haysaa 12 saacadood. Heerkulku kama sarreeyo heerka 2-aad. Taas ka dib, 12 saacadood gudahood, miro ayaa kululeynaya +20 digrii.
Ma taqaanaa? Dalalka qaarkood, yaanyo waxaa loo yaqaannaa tufaax. Faransiiska ayaa ugu yeeray "jacaylka jacaylka", iyo Jarmalka - "jannada jannada".
Waa ku filan in la sameeyo habka 2-3aad ee saameyn la taaban karo.
Sida loo yareeyo miraha yaanyada geedo geedo waraaqda musqusha
Habka loo yareeyo yaanyada laga bilaabo abuurka waraaqda musqusha ayaa si ammaan ah loo sifayn karaa si loo ogaado casriga casriga ah. Qodobada wanaagsan waa cad:
awooda looga fogaado cudurrada abuurka;
ugu yaraan booska loo baahan yahay;
awoodda lagu aqoonsan karo sprouts ugu xoogan.
Waxaa jira fursado dhowr ah oo loogu talagalay biqilkaas oo leh qodobbada taban iyo kuwa xunba. Habka 1aad. Iyadoo dhalo caag ah. Tani waa doorka ugu fudud ee ugu fudud. Dhalada waa in la gooyaa dhererka oo ku rid warqad qoyan biyaha hoostiisa. On isaga si loo qaybiyo geedo. Dhalada waxaa lagu daboolaa bac caag ah, oo abuuraya sharaxaad of aqalka dhirta lagu koriyo. Iyo inaad hubiso inaad godad ka dhigto oksijiinka. Weelka waxaa ugu fiican qorraxda.
Habkani wuxuu si cad u muujinayaa sida loo yareeyo yaanyada miraha waraaqaha musqusha si degdeg ah oo si fudud. Habka waa mid aad u habboon sababta oo ah uma baahna waraabinta, tan iyo saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo ayaa la sameeyaa meel bannaan. Sprouts waa inay soo baxaan maalinta saddexaad.
Baro qaababka noocan oo kale ah ee yaanyada sii kordhaya: shuban, on hidroponnik, on windowsill, yaanyada sii kordhaya sida habka of Maslov iyo Terekhins.
Habka 2aad. Iyadoo saliideed. Saliidda ayaa loo baahan yahay in la jarjaro 10 xabbadood oo ballaaran, oo waraaqo ku riday. Dhererka ayaa ku faafay xagga sare fogaan ah oo ku dhow 4 cm midba midka kale. Lakabka soo socda, ku celi warqadda iyo saliida. Dhammaan "naqshad" ayaa si tartiib ah u duuban kuna duuban tuubbo caag ah. Dhammaan xirmooyinka waa in lagu dhejiyaa weel biyo ah (qiyaas ahaan laba farood oo ka hooseeya hoosta) iyo, sida ku jirta tusmada koowaad, daboolay bac. Qaabka 3aad. Lined under laminate. Doorashadan waxay la mid tahay midkii hore, kaliya ayaa loo isticmaalaa dahaarka laminate-da leh. Sidoo kale, "xargaha" dheji oo ku rid biyaha. Sida ugu dhakhsaha badan ee tamaandho, waxay ku beeray dhulka.
Ereyga biqilka abuurka yaanyo
Jawaabta su'aasha, ka dib maalmo intee ka badan miraha yaanyada ku dhalan on geedo, waa dareen ah in dad badan oo bilowga beeraha khudradda. Tani ma ahan wax la yaab leh, tan iyo markii aad ogtahay macluumaadkan, waxaad si cad u dejin kartaa waqtiga aad u baahan tahay inaad ku beeri geedo.
Geedo of yaanyada leeyihiin ku dhowaad isla mudada biqilka. Miro qallalan, marka lagu beeray dhul furan, ayaa kori doona wax ka hor 10 maalmood ka dib.
Waxaad dardargelin kartaa nidaamkan, haddii aad siiso daawo gaar ah oo qallafsan, heerkulka isbeddela iyo waxyaabaha kale. Xaaladdan oo kale, miraha waxay u jeedaan 5 ± 1 ama 7 + 1 maalin iyadoo ay ku xiran tahay kala duwanaanta iyo tayada. Laakiin waqti isku mid ah heerkulka waa in lagu hayaa heer aan ka hooseeynin +20 digrii. Marka hawo qabow, muddada biqilka ayaa dib loo dhigayaa dhawr maalmood.
Waa muhiim! Ka taxadar qoto dheer ee dhulka. Oo dhulka darafyadiisa oo dhammuna way madoobaan doonaan.
Shuruudaha abuurka yaanyada
Si aad geedo yaanyada guriga ku bixiyay goosashada miro badan, waxaa muhiim ah in la doorto mudada saxda ah marka ay wanaagsan tahay in ay beeraan abuurka. Xaaladdan, kalandarka kaliinka ayaa iman doona badbaadada. Ku habboon khudradda sii kordhaysa ee geedo waa maalmo marka bilowga dhalinyarada ay saameyn ku yeeshaan calaamado muujinaya bacriminta, kuwaas oo ah: Kansarka, Libra, Scorpio, Pisces ama Aries.
Haddii maalmahaas sababa qaar ka mid ah suurtagal ahayn in la beero tamaandhada, waxaa jira maalmo shuruudo wali ah oo ku jira kalandarka dayaxa, kaas oo loo isticmaali karo beeridda.
Ka hor intaan la dhicin
Ka hor inta beeritaanka abuurka ah ee dhulka u furan, bilawga waxaa la geliyaa guriga iyagoo ku jira weel weel leh dhulka. Koob kasta oo kasta, kaliya hal abuur ayaa lagu rusheeyaa qiyaastii 1 sentimitir oo marmarna la waraabiyo.
Waxaa fiican in la beero geedo hore u bislaaday, kaas oo ka dib markii barareyso 5-7 maalmood muuqan sprouts. Ka dib markaa waxaa loo wareejiyaa weelal carrada. Daryeel dheeraad ah wuxuu u baahan yahay waraabinta wakhtiga ah ka hor inta aan lagu tallaalin beerta lagu koriyo ama beerta khudradda.
Diidmada waa in si taxadar leh loo sameeyaa si aanay u dhaawacin jiilalka geedo. Isla mar ahaantaana waa mid aad u muhiim ah in la ilaaliyo nidaamka heerkulka oo hawadana u soo jiido si looga fogaado muuqaalka lugta madow.
Haddii aad u hoggaansanaatid sharciyadan, muuqaalka jeermiska ma qaadan doono waqti dheer.
Marka beeritaanka yaanyada ee aqalka dhirta lagu koriyo ama dhul furan waxay u baahan yihiin inay xoogga saaraan xaaladaha cimilada iyo meesha ay koraan. Haddii aad tixgeliso wakhtiga guud ahaan la aqbalo, ka dibna lagu beeray geedo lagu dhisay aqalka lagu koriyo ee qeybta hore ee Maarso (illaa 15 lambar), filimka furan ee furan - qaybta labaad ee Maarso - horraantii Abriil. Tamaandho ayaa lagu beeray dhul furan, sida caadiga ah, bisha Juun.
Ka hor inta aan la beeri, waa in la jaraa caleemaha hoose si ay u yaraadaan qoto dheer. Geedo waxay u baahan yihiin inay ka soo baxaan dheriga iyo buro dhulka ah oo ay ku koraan, u dhaqaaqaan godka. Goobta hore ee dibedda waa in la bacrimiyo. Mid ka mid ah qaado oo ah Bacriminta gaarka ah, tusaale ahaan, Saxanka Toobada, waa ku filan. Waxaa lagama maarmaan ah in la xoojiyo asliga ah dhulka oo 10-15 cm ka hor inta aanuu hurdo dalool ah, dhirta ayaa la dhigaa dhinaceeda waxayna si badan u waraabisay dhowr jeer. Biyaha waa in ay dhex galaan qoto dheer si ciid ah si xididada yaanyada u raacaan. Next, godkii ayaa lagu daboolay dhulka, iyo geedo jiifo muddo wakhti ah, sidaa daraadeed in asliga ah uusan qoto dheeraynin ciidda qabow.
Tamaandhada si fiican u koraan, haddii ay meel ay hore u koray eggplant, basbaas ama kaabash. Dalagyada beerta noocan oo kale ah sida qajaarka, hadhuudhka, digirta iyo kaabashka ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo ka soo horjeeda tamaandhada.
Ka dib markii la rusheeyaa dhulka, dhirta waxaa loo xidhxidhay a peg ah. Ka waraabinta dusha sare looma baahna in la iska ilaaliyo qolof
Si aad u ilaaliso qoyaanka, beeray yaanyada waa peat mulched.
Ka dib markaa, waxay ku sii jirtaa oo keliya in ay biyo ku jirto, wakhtigeeda si ay u quudiso oo sugto goosashada.
Maxaa la sameeyaa haddii abuurka yaanyo uusan Gagaashin
Maaha wax aan caadi ahayn in miraha lagu beeray in ay ku sii jiraan dhulka aan lahayn sprouts. Tani waa wicitaan lagu fiirsado qaladaadka suurtagalka ah marka la beero.
Maxaa dib u dhigi kara biqilka geedo iyo sida loo saxo.
Heerkulka hooseeya ee muuqaalka sprouts. Marka heerkul fiican la cabbiro +21 digrii, qalad ah dhowr darajo ayaa ka hortagaya abuurka ka soo baxa. Tan waxaa lagu saxi karaa iyadoo la abuurayo xaalado heerkul ah oo wanaagsan.
Qoyaan sare ee dhulka. Qoyaanka qoyan, wax lagu beero ayaa laga yaabaa in ay ka soo baxaan oksijiin la'aanta. Xaaladdan, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa tayada dhulka isku dar ah, iyo sidoo kale hoos u dhigidda waraabinta.
Qoto dheer ee beerashada. Isla mar ahaantaana, geedo way adag tahay in la jebiyo oo ay dhintaan. Qoyaanka ugu fiicnaantu waa 1-1.5cm, waraabinta waa in la fuliyaa ka hor beerashada, oo aan dib loo dhigin, si aysan walaxku u sii dheereeynin xittaa badan.
Ma taqaanaa? Dabeecadda, waxaa jira in ka badan 10,000 noocyada yaanyada.
Iyadoo habka si habboon loo ilaaliyo abuurka geedo, geedo goos goos ah oo waqtigaa ah oo lagu beero dhulka iyo daryeelka saxda ah, waxaad hubaal ka heli doontaa tayo sare leh oo taajir ah oo tayo leh oo tamaandho ah.